Zoma, Aprily 25, 2014 Alahady, Desambra 24, 2017 Douglas Karr
Fotoana famakiana: <1 minitra Stitch Labs dia manolotra fitantanana filaminana sy fitantanana mitahiry manerana ny fantsona e-varotra. Aza atao ny mametraka an-tanana isa be dia be ao anaty takelaka, mahita faktiora, na mijery fampahalalana momba ny fifandraisana. Stitch dia mamela anao hivarotra amin'ny fantsona fivarotana marobe sy hifehezana ny lisitra avy amin'ny toerana iray Stitch Features Multiple Sales Channels - Fehezo ny zava-drehetra manomboka amin'ny baikony ka hatramin'ny fandefasana amin'ny rafitra tokana. Fitantanana inventory - tazomy ny isa marina ary miantoka ny fandefasana tsara ny baiko. Fanarahana ny baiko - mandeha ho azy
Alakamisy 14, 2013 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Fotoana famakiana: <1 minitra Visual Website Optimizer dia fitaovana fitsapana A / B izay mamela ireo matihanina amin'ny marketing hamorona kinova samihafa amin'ny tranokalan'izy ireo sy ny pejy fipetrahana amin'ny alàlan'ny tonian-dahatsoratry ny tsindrio ary avy eo jereo hoe iza no manafatra ny tahan'ny fiovam-po na ny varotra. Visual Website Optimizer koa dia rindrambaiko fitiliana multivariate (metodolojika feno) ary manana fitaovana fanampiny toy ny fikendrena fitondran-tena, heatmaps, fanandramana azo ampiasaina, sns. Fitsapana A / B - Mamorona kinova samihafa amin'ny tranokalanao miaraka amina
Fotoana famakiana: <1 minitra Vitsy ny zavatra mety hahasosotra kokoa noho ny mamolavola modely HTML mailaka na miasa amin'ny mpanamboatra modely an'ny antoko fahatelo. Alao sary an-tsaina ny fahafahanao mandahatra, mamolavola, manamboatra indray ary manaingo ny maodelin'ny mailakao manokana… tsy misy kaody HTML na fahaizana mandrafitra tranonkala. Izany indrindra no noforonin'i dotMailer tamin'ny EasyEditor. Endri-javatra amin'ny dotMailer's EasyEditor: manafatra haingana ny sarinao ary mamorona tranomboky - Mijanona ho voalamina miaraka amin'ny sary fampielezan-kevitra rehetra amin'ny toerana iray. Fandefasana hafatra amin'ny fampielezan-kevitra
Fotoana famakiana: <1 minitra Ny fisafidianana ny sehatra ecommerce dia miankina amin'ny fiovana marobe. Ny isan'ny vokatra amidinao, ny fanaingoana ireo vokatra misy ireo, ny fitakiana fampidirana ary ireo loharano entina hanatsarana sy hanatsarana ny sehatra dia mitana andraikitra avokoa. Magento dia nipoaka ho toy ny sehatra ecommerce orinasam-pifidianan'ny orinasa noho ny fahafaha-miovaova amin'ny fanaingoana azy ary ny mpihaino marobe mpampiasa manangana vahaolana sy manohana azy. Manana mpiara-miasa Magento Platinum miasa izahay
Fotoana famakiana: 3 minitra My Mobile Fans dia manolotra rindrambaiko finday mora vidy sy tranokala finday ho an'ny tontolon'ny orinasa tsy mitady tombony ary kely amin'ny alalàn'ny orinasany mitarika mpamorona fampiharana Do-It-Yourself (DIY). Miaraka amin'ny endri-javatra manankarena mihoatra ny 40 amin'ny fampiasana finday, toerana ary haino aman-jery sosialy, izy ireo dia mety ho ny fananganana rindrambaiko finday mora sy matanjaka indrindra eny an-tsena. Tsotra ny fampiharana, manome mpamosavy tsikelikely hisintona anao hametraka ny rindranasa findainao. Dingana 1: Safidio ny
Page 6 ny 8